शशांकको कांग्रस हराउने यी २८ बर्षीय युवा इन्जिनियर दीपेन्द्र | The Mirror
शशांकको कांग्रस हराउने यी २८ बर्षीय युवा इन्जिनियर दीपेन्द्र
May 26, 2022 May 26, 2022 adminLeaveaComment on शशांकको कांग्रस हराउने यी २८ बर्षीय युवा इन्जिनियर दीपेन्द्र
मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेपछि २८ वर्षका दीपेन्द्र सुनारी मगर चीनबाट जन्म गाउँ नवलपुरको बुलिङ्टार फर्किए।
डोजरले जताततै पहाड भत्काउनुबाहेक गाउँको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन नभएको उनले देखे। उनी गाउँघर चहारे। कोरोना महामारीको समयभरि गाउँमै बसे। त्यसबेला उनले सरकार र जनता बीचको सम्बन्धमा ठूलो खाडल देखे।
गाउँमा सम्पूर्ण आधारभूत कुरा हरुको निकै अभब थियो। युवाको विदेश पलायन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, आयआर्जनमा समस्या, यी यावत कुराहरू देखेपछि दीपेन्द्रलाई छट्पटी भयो।
उनलाई गाउँलेका निर्दोष मनहरुले प्रश्न सोधेको अनभूति हुन्थ्यो, ‘के तिमी हाम्रो जुनी बदल्ने कुनै काम गर्न सक्छौं ? उनी भावुक हुन्थे। कुनै प्रोजेक्ट वा योजना वा कार्यक्रमबाट मात्रै जनताको खुसी ल्याउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका दीपेन्द्र राजनीतिमा होमिने सोचमा पुग ।
उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि नेकपा एमालेको थियो। २०५४ सालमा दीपेन्द्रका बुवा शेरबहादुर सुनारी मगरलाई गाविस अध्यक्षमा कांग्रेसकै उम्मेदवारले हराएका थिए । २०७४ को चुनावमा वडा नम्बर १ बाट वडाध्यक्ष उठेका शेरबहादुर फेरि हारे। कारण, यो कांग्रेसको सबैभन्दा बलियो किल्ला हो।
नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाक छोरा, पूर्व महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने बुलिङटारले तीन पटकसम्म उनलाई जिताएको छ। बुलिङटारलाई ‘बीपीको छोराले रोजेको ठाउँ’ भन्ने गरिन्छ। कतिपय कांग्रेस कार्यकर्ताले बुलिङटारमा झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी कांग्रेस रहेको बताउँछन।
अब दीपेन्द्र गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा लागे। हार निरन्तरताको अर्को ताज थप्न हत्तपत्त उम्मेदवार बन्न नेताहरू समेत हिच्किचाउँछन् यहाँ।
पार्टीको बैठकमा आफू गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा मात्रै राखेनन् दीपेन्द्रले गाउँको अहिलेको अवस्था र आफ्ना योजना पनि सुनाए। उनी गाउँका विषयम धेरै सूचना, जानकारी र तथ्यांक बोकेर हिँडेका थिए।
जितको आधार देखाउँदा कतिपय नेताहरु ओठ फर्काउँथे तर दीपेन्द्र टिकट पाए जसरी पनि जित्ने र जनतालाई खुसी दिने बताइरहेका थिए। गाउँपालिका अध्यक्षका लागि दीपेन्द्र सहितसात जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। नवलपुर जिल्ला इञ्चार्ज तिलक महत, सहइञ्चार्ज रवीन्द्र अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पौडेललगायतलाई आफूले कन्भिन्स गरेको दीपेन्द्र बताउँछन्।
अन्ततः दीपेन्द्रले एमालेबाट गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट पाए। पढे लेखेका युवालाई गाउँमा बोलाए। तथ्याङ्कलाई टेकेर उनीहरुले योजना बनाए। उनीसँग सबै क्षेत्रका युवाहरुको टिम छ।
दीपेन्द्रसहितका युवा जनताको घरमा घरमा पुगे। समस्या मात्रै बताएनन्, आफ्ना एजेण्डा पनि सुनाए। गाउँको विकास गर्ने तरिका जनतालाई बुझाए।
३० वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा दीपेन्द्र चार हजार ५९ मत पाएर अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका शशीकिरण बस्ताकोटीले ३ हजार ९ सय मत ल्याए । यहाँका १२ हजार ५०१ मतदातामध्ये ८ हजार ४२२ मत खसेको थियो।
२०५१ साल साउन १२ गते बुलिङ्टार १ कोटथरमा जन्मिएका दीपेन्द्रले गाउँकै जनजागृति प्राविबाट आधारभूत तहको शिक्षा र रत्नराज्य माविबाट कक्षा १० सम्मको शिक्षा लिए। एसएलसी पास गरेपछि उनी भरतपुरको अरोमा उच्च माविमा विज्ञान विषय लिएर पढे।
त्यसपछि काठमाडौं थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमा स्नातक पढ्न पाए। स्नातक पूरा गरेपछि सरकारकै पूर्ण शुल्कमा चीनको उहानबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर पूरा गरे। चीनबाट फर्किएपछि उर्जा क्षेत्रमा काम गरे।
उनका बुवा शेरबहादुर सुनारी बुलिङटारमा एमालेबाट राजनीति गर्छन्। शेरबहादुरका दुई छोरामध्ये जेठा हुन, दीपेन्द्र। उनी पारिवारिक पृष्ठभूमि र गाउँका जनताको दुःखले राजनीतिमा आउन प्रेरित गरेको बताउँछन्।
दीपेन्द्रले एमालेको विज्ञान तथा प्रविधि विभागमा बसेर काम गरे। युवाले केही सिकेर, जानेर देश र गाउँमा नै फर्किएर जनताको सेवा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। आफूले आर्जन गरेका ज्ञानसीपको आफ्नै गाउँका लागि खर्चिने उनको योजना छ।
‘आधारभूत समस्या समाधान गर्छु’
दीपेन्द्रले गाउँको विकासका लागि उति ठूलो सपना राखेका छैनन्। हचुवा र जनता ढाँट्ने गरी काम आफूबाट नहुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मैले जनताको बीचमा पूरा नै गर्न कठिन हुने योजनासुनाएको छैन, जनताका दैनिक आइपरेका समस्याहरुको समाधान दिने काम गर्छु।’
उनले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने र शिक्षालाई व्यावहारमुखी बनाउनुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। युवाको कृषि फर्मको दर्ता निशुल्क गर्ने, पूर्वाधार बनाइदिने, कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने, लगानीकर्ताको स्केल अनुसार रकम नहुने किसानलाई १ देखि १० लाखसम्म कृषि कर्जाका लागि गाउँपालिकाले शून्य ब्याजदरमा बैंकसँग जमानत बसेर दिने व्यवस्था गर्ने उनको सोच छ ।
बिजुली नपुगेका बस्तीहरुमा विद्युत, खानेपानीको चरम संकट रहेकाले खानेपानीको सहज व्यवस्थापन, आयआर्जन तथा सीपमूलक साना व्यवसायमा जनतालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनले बताएका छन्। गाउँमा स्वास्थ्य उपचार गराउने भरपर्दो ठाउँ नभएकाले चिकित्सक बस्ने एउटा भरपर्दो अस्पताल, विद्यालयहरुको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने, विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय छाड्ने वातावरणको अन्त्य गर्ने उनको योजना छ।[यो समाचार onlinekhabarमा छापिएको छ]
मङ्कीपक्स संसार भरी फैलिदै, युएईमा नयाँ बिरामी, निकै खतरनाक हुनसक्छ
चारबुँदे माग सहित पुण्य गौतम आमरण अनशनमा
Tagged dipendrashashanka koirala
‘हारको प्रमुख कारण पार्टीभित्रकै अन्तर्घात, समीक्षा हुन्छ’:- के पी ओली